ISBITAALKA SOS UMA XIRNA BEESHA REER XAAJI SULEYMAAN
Baryahaan waxaa website-da iyo warfaafinta Somaalida qaarkood qorayeen in Isbitaalka SOS uu u xiran yahay Beesha reer Xaaji Suleymaan, taasoo ay website-yada qaarkood sida GOOB JOOG soo qoreen in Guurtida beesha Hawiye ku tilmaameen arin ceeb ku ah beeshaas in isbitaalka SOS iyaga u xirnaado ayna beesha reer Xaaji Saleymaan sheegeen inaan Isbitaalkaas la furi Karin.
Haddaba anagoo ah Jaaliyadda Beesha reer Xaaji Suleymaan ee ku nool dalka Canada waxaan umadda Somaliyeed u sheegaynaa in hadalada ay website-yadasi soo qoreen yihiin kuwa been abuur ah meel ka dhacna ku ah magaca iyo sharafta Beesha reer Xaaji Suleymaan.
Ummadda Somaliyeed way ogtahay in Beeshani horyaal waligeed ka ahayd walina ka tahay xal u raadinta iyo nabadaynta ummadda Soomaaliyeed qaasatan koofurta Soomaaliya, laga soo bilaabo la dagaallankii Xukunkii kaligi taliyihii Maxamed Siyaad Barre ilaa iyo waqtiga la joogo.
Iyadoo ay caddahay in sababta Isbitaalkaasi u xiran yahay ay ku lug yeelan karaan shaqsiyaad u dhashay beesha ayna ka tabanayaa qaar ka mid ah howl-wadeenada Isbitaalkaas, inkasta oo kuwa dolman ay ku andacoonayaan in aan wada xaajoodka iyo habsami u socodka Isbitaalka aan la’isku lug xirin, waxa ayna cadeyeen in uusan Isbotalku u xirneyn iyaga, laakiin uu u xiranyahay kuwa gacanta ku haya Isbitaalka, si ay u hoosaasiyaan xaaladda dhabta ah ee iyo wax ka qabashada dhacdadan murugsan, waxaa kale oo ay sheegeen in Isbitaalku loo furo Bulshada dolman, sida Dumarka iyo Carruurta.
Jaaliyaddu waxa ay shacbiga Somaliyeed u cadaynaynaa in aan Isbitaalka SOS u xirnayn Beesha Reer Xaaji Suleymaan, isla markaasna ay ku haboon tahay wabsit-yada iyo Idaacadaha qaarkood arintaas soo qoray in ay raali galin ka bixiyaan wararkooda ku dhisneyn xaqiiqada, kana fiirsadaan inay qoraan eeddayn beel dhan ku wajahan, waayo way ogyihiin in aan masuuliyadda dhibaatooyinka shacbiga Muqdishu ku habsaday beel gaar ahi masuul ka ahayn.
Ugu danbayntii waxaan odayaasha isku magacaabay Guurtida beesha Hawiye ka rajaynaynaa in ay wax ka qabtaan arimaha ka culus xirnaanshaha Isbitaalka SOS sida, kala badbaadinta dhiigga dadka walaalaha ah ee qul qulaya waddooyinka Muqdishu iyo maamul u samaynta Magaalo madaxda Somalia si looga badbaado dhacdooyinka noocaan oo kale ah.
Beesha reer Xaaji Suleymaan
Waxaa Toronto nooga soo diray.
Waxaa kala xiriitaa Amiin Yuusuf Khasaaro amiinkhasaaro@hotmail.com